इट्टा भट्टामा रोजगारीदेखि अटोमोबाईल्स व्ययसायीसम्म – SatyaPatrika
इट्टा भट्टामा रोजगारीदेखि अटोमोबाईल्स व्ययसायीसम्म
लक्ष्मण कँडेल एक सफल व्यवसायी हुन् । २०२९ साल कात्तिक ६ गते बुवा बिष्णुप्रसाद र आमा लक्ष्मी कँडेलको माइलो सुपुत्रको रुपमा उनी साविक गुल्मी जिल्ला दिगाम गाविसमा जन्मिएका हुन । जीवन संघर्षको क्रममा उनले २०५६ सालदेखि कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अटोमोवाईल व्ययसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी हाल सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघको महासचिव पनि हुन् । भने नेपाल टाइकोन्दो संघ कर्णाली प्रदेश र लाइन्स क्लब सुर्खेत गढीको अध्यक्ष समेत रहेका छन् । अटोमोबाईल्स व्ययसायको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी :
तपाईको बाल्यकाल र व्यवसायीक यात्राबारे बताईदिनुहोस् न ?
मेरो बाल्यकाल रमाईलो र खुसीमै बित्यो । मैले १ देखि ५ कक्षासम्म गुल्मीकै सारदा माविमा अध्ययन गरे । ५ देखि १० गुल्मिको तत्कालिन जनता उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुँ । २०४६ सालमा एलएलसी पास गरे । त्यसपछि प्लस टू पढ्न काठकाडौंं रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा भर्ना भए ।
मानविकी तथा समाज शास्त्र विषयमा प्लस टू पास गरेपछि अब व्यबसायमा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने सोच भयो । त्यो बेला मेरो काकाले रुपन्देहीमा इट्टा भट्टा संचालन गर्नु भएको थियो । त्यही इट्टा भट्टामा रोजगारीका हिसाबले काम सुरु गरे । आफ्नै काकाको भट्टा भएको हुदाँ त्यहाँको म्यानेजम्याट संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाए । त्यो नै मेरो व्यबसायीक यात्राको पहिलो खुट्किलो हो ।
मैले त्यहाँ दुई वर्ष जति काम गरे । त्यसपछि पोखरा नुडलस प्रालिले रम्मा चाउचाउ बजारमा ल्याएको थियो । उद्योग मन्त्री समेत रहनुभएका हरी पाण्डेसँग मेरो नाता पथ्र्यो । उहाँले मलाई उक्त चाउचाउ नेपाल भरी लन्चिङ गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । त्यही जिम्मेवारी वहन गर्न म कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आएको थिए । त्यही सिलसिलाकै अनुभवबाट २०५६ साल माघ १६/१७ तिर मोटरसाईकल मर्मत सेन्टर (वर्कसव) अथवा सर्भिससेन्टर कार्य संचालन सुरु गरेको हुँ । त्यसपछि मेरो व्यवसायीक यात्रा अघि बढ्दै गयो ।
सुर्खेतमा मोटरसाईकल व्यवसाय नै गर्नुपर्छ भन्ने कसरी सोच आयो ?
अहिलेको कर्णाली प्रदेश त्यतीबेला मध्यपश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्र थियो । त्यतीबेला मेरो सवारी साधन पनि दुईपांग्रे नै थियो । म मोटरसाईकलमा नै यात्रा गर्नुपथ्र्याे । म त्यतीबेला देखिनै टेक्निकल माइन्ड भएको मान्छे थिए । मैले बुटवलका केही स्वरुम पनि अवलोकन गरेको थिए । त्यहीबेलादेखि अटोमोबाईल्स सम्बन्धि जिज्ञासा बढ्दै गयो । र मैले अटोमोबाईल्स ब्यवसाय गर्ने सोच बनाए ।
म सर्खेत आएपछि मेरो मोटरसाइकल बिग्रियो । सर्खेतमा एउटा मात्र वर्कसप थियो । ३० वटा जती मात्र मोटरसाईकल थिए । मर्मत गर्नलाई प्रयाप्त सामान र दक्ष प्राविधिकको अभाव थियो । मेरो मोटोरसाईकल बनाउन नै दुईदिन बस्नुपरेको थियो।
सुर्खेत उपत्यका देख्दा भोली काठमाडौं र पोखरा जस्तै सुन्दर बन्ने ठाउँ हो भन्ने लाग्यो । त्यसैले यहाँ अटोमोबाईल्स त्यसमा पनि दुईपाग्रेको भविष्य राम्रो छ भनेर यही क्षेत्रलाई छनोट गरी व्यवसाय सुरु गरेको हुँ ।
तपाँई यस व्यवसायमा निखारीएको व्यक्ति पनि हो । कर्णालीमा दुईपाग्रे सवारी व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
२०५६ देखिको इतिहास बताउनुपर्दा कर्णालीमा अहिलेसम्म असिम मोटर पार्टस्ले ३० हजार बढी मोटरसाईकल बेचेको छ । अहिले आएर तीन पाग्रे सवारीको पनि बिक्री कार्य थालेको छ । करिब दुई हजार अटो बेचेका छौं । कर्णालीमा बजाजको मार्केट सियर भण्डै ६५ देखि ७० प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश भित्र अहिले वार्षिक तीन हजार देखि ३५ सयसम्म मोटरसाईकल बिक्री हुन्छन् ।
जसमध्य दुई हजार मोटरसाईकल हाम्रो नै बिक्री हुने गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा कर्णालीका कतिपय ठाउँमा भर्खरै बाटाहरु खोलिएका छन् । त्यहाँ सवारी साधन भनेकै मोटरसाईकल नै उपयुक्त हो । सबै ठाउँमा बसको पहुँच छैन । त्यो कारणले अहिले दुई पांग्रे सवारी साधनले नै राम्रो छाप छोडेको छ । हाम्रो भुगोल र बाटोघाटो सुहाउँदो ब्राण्ड पनि बजाज भएको कारणले राम्रो मार्केट लिएको छ ।
ग्राहकले किन बजाजकै सवारीसाधन रोज्छन् ? अतिरिक्त सेवा दिनु भएको होकी यसका बिशेषता नै अरु भन्दा फरक छन् ?
बजाज मोटरसाईकल भनेको आफैमा एउटा विश्व प्रख्यात ब्राण्ड हो । हाल विश्का करिब ७० देशमा बजाजको मोटरसाईकल बिक्री हुन्छ । बजाजको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको नेपालको भुगोल सुहाउदो, राम्रो पिकप भएको, राम्रो माइलेज दिने र मेन्टेनेज कस्ट एकदमै सस्तो, अरु ब्राण्डका मोटरसाईकल भन्दा यसको पार्टस् अत्यधिक सस्तो र जहाँपनि उपलब्ध हुन्छ ।
अहिले प्रदेशका दशवटै जिल्लामा असिम अटोपार्टस् र बजाजका उत्पादन उपलब्ध छन् । सर्भिसको लागि राम्रो पूर्वाधार सहितको व्यवस्था छ । त्यसैले पनि ग्राहकको रोजाईमा बजाज परेको हो ।
यसका साथै समय अनुकुल टेक्नोलोजी विस्तार गरेर कसरी सेवा सुविधा दिने भन्नेतर्फ हाम्रो जोड छ । सर्भिस् सेन्टरमा ग्राहक आएपछि धेरै समय कुर्ननपरोस, छिटो भन्दा छिटो सर्भिस् सेवा पाउन भन्ने तर्फ केन्द्रित भएका छौं। गत वर्ष मात्र कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर संचालनमा ल्याएका छौं।
त्यहाँ करिब ४० जना कर्मचारीले काम गरिराखेका छन् । त्यो सर्भिस सेन्टरबाट दिनमा करिव एक सय जति सवारी साधन सर्भिस गरेर सेवा दिन सफल भएका छौं । अबको उदेश्य भनेको बजाजका मोटरसाईकल सर्बसुलभ रुपमा प्रदेशका दशवटै जिल्लमा पु¥याउने र दक्ष मेकानिकद्धारा सर्भिस सेवा दिने हो । साथै सर्भसुलभ तरिकाले कर्णालीका सबै ठाउँमा एउटै रेटमा पार्टस् पुर्जा दिने तयारीमा छौं । ग्राहकले विकट तथा दुर्गमताको बाहानामा कुनैपनि सामानमा मंहगो मुल्य तिर्नुपर्ने छैन । बजाजको पार्टस् प्रत्यक ग्राहकले सहजरुपमा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडी बढेका छौं ।
अटोमोबाईल्स व्यवसायको सम्भावना र चुनौतीहरु के कस्ता छन् ?
यसमा सम्भावनासँगै चुनौती पनि धेरै छन् । दक्ष प्राविधिक पाउन मुस्किल छ । दक्ष जनशक्तिको जबसम्म उत्पादन हुनसक्दैन तबसम्म कुनै क्षेत्र पनि प्रगतिको बाटोमा अगाडी बढ्न सक्दैन । रोजगारी सृर्जना गर्न र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कर्णालीमा एउटा रोजगार मुलक सिप टेक्नोलोजी कलेजको स्थापना हुन आवश्यक छ ।
जसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरोस् । जुन जनशक्ति स्वरोजगार बन्न तथा सहजै रोजगारी पाउन सकुन । यस्तै बैकिङ क्षेत्रमा ब्याजको बिकराल समस्या थियो । हाल केही सहज हुदैआएको छ । हामी रोड र पूर्वाधारमा एकदमै कमजोर छौं । त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । चुनौतीसँगै अवसर पनि हुन्छ । चुनौतीलाई नै अवसरका रुपमा लिनसक्नुपर्छ । अटोमोबाईल्स सेक्टरमा प्रसस्तै अबसर छन् । कर्णालीमा त अँझ धेरै सम्भावना र अवसर छन् ।
व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि भावी योजनासहित अन्त्यमा केही भन्नु छ भने बताईदिनुहोस् न ?
अबको मेरो योजना भनेको अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर प्रदेशका १० वटै जिल्लामा संचालन गर्ने हो । बजाजको ब्राण्डप्रति लगाब राखेर हिड्नु भएका ग्राहकहरुलाई बढीभन्दा बढी टेक्नोलोजी सहित सेवा सुविधा दिने मेरो योजना छ । अब देशको समृद्धि र उनन्ती गर्ने युवाले नै हो । तसर्थ युवा स्वरोजगार बन्न जरुरी छ ।
रोजगारी चाहाने युवालाई रोजगारीको अवसर सृर्जना गर्न जरुरी छ । जबसम्म उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जोडिन सक्दैनौ, तबसम्म व्यक्ति र देश समृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले हामीसँग हातेमालो गरेर अटोमोबाईल्सका हाम्रा ब्राण्ड प्रयोग गर्दै स्वरोजगार बन्ने युवाहरुलाई बधाई दिदै आगामी दिनमा पनि समन्वय जारी रहोस् । असिम अटो पार्टस् र म सधै यहाँहरुको साथमा हिड्न तयार छुँ ।
कर्णाली प्रदेश : १ हजार ६ सयले लगाए कोभिड खोप, ११ जनामा देखियो खोपको असर
सुर्खेतमा विजुलीका पोल बोकेको ट्रक भीरबाट खस्दा दुई जना घाईते